Si aad ugu rakibto fidinta Google Chrome ee loogu talagalay Mac | Waxaan ka socdaa mac
Si aad ugu rakibto kordhinta Google Chrome-ka Mac waa inaad ka sameysaa Kaydka Webka ee Chrome
Pedro Rodas | | Apple, Noticias, Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac
Waxay u muuqataa in falsafadda shaqada ee Apple ay sannado badan ku dalbatay dukaamadeeda barnaamijyada ay fulinayaan kooxo waaweyn oo kombuyuutarro ah. Sida aan wada ogsoonahay, mid ka mid ah waxyaabihii ay Apple raadineysay abuuritaanka dukaamada arjiyada ayaa ahayd inay ilaaliso nidaamyadeeda ay ku shaqeeyaan.
Haatan Google ayaa timid oo laga bilaabo Julaay 2015 waxay u hirgelin doonaan adeeg la mid ah biraawsarkaaga Google Chrome. Laga bilaabo taariikhdaas, kordhinta kaliya ee lagu rakibo karo biraawsarka Google waxay ka imaan kartaa dukaanka ay bilaabayaan, Bakhaarka Webka ee Chrome.
Sidaan horeyba u sheegnay, isbedelka Mac-da waxaa la sameyn doonaa bisha Luulyo, isbadalku wuxuu wax ku ool u yahay Google Chrome Windows. Hada laga bilaabo, kordhinta ay isticmaaleyaashu ku isticmaali karaan biraawsarka ayaa in yar ka badan la xakameyn doonaa, in aad loo xakameeyo sida wax loo dhacayo ama waxyaabaha aan gebi ahaanba sharciga ahayn la sameeyo tusaale ahaan.
Dhinaca kale, waxaa la xakameyn doonaa in fidinta asalka shakiga leh ay ka soo aruurin karto xogta kombiyuutarada isticmaalayaasha rakibiya Google Chrome. Waxaan ku xusuusinaynaa inaad biraawsarka Google Chrome wuxuu ahaa codsigii ugu khatarta badnaa sanadkii hore.
Mabda 'ahaan kumaanaan dhaqangelin siyaasaddan kanaalka horumarinta ee Windows si loo siiyo horumariyeyaasha ikhtiyaarka. Nasiib darrose, waxaan aragnay tan iyo markii uu socday barnaamijyo xunxun oo rakibaya kordhin aan loo baahnayn oo ka baxsan dukaanka dadka isticmaala. Isticmaalayaasha ay saameysay waxaa ku haray fiditaanno xun oo ka yimaada kanaal aysan iyagu dooran. Sidaa darteed, laga bilaabo maanta waxaan u keenaynaa siyaasaddan Windows. Waxay ku soo socotaa Mac dhowaan, bisha Luulyo 2015.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Si aad ugu rakibto kordhinta Google Chrome-ka Mac waa inaad ka sameysaa Kaydka Webka ee Chrome
La kulan Mac-yada lagu qori doono "duugow" ee Apple bisha Juun
Adeegga qulqulka muusikada ee Cupertino waxaa loogu yeeri karaa Apple Music